मुख्य पृष्ठपत्रपत्रिकामा आज५० करोडको एन्टिजेन किट खरिद गर्ने तयारी
विराटनगर । सरकारले र्‍यापिड डायग्‍नोस्टिक टेस्ट (आरडिटी) किटपछि फेरि ५० करोडको एन्टिजेन किट खरिद गर्ने तयारी गरेको छ ।
विज्ञहरूले भने एन्टिजेन खरिद गर्नुभन्दा पीसीआर परीक्षणमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन् । सरकारले कोरोना भाइरसको परीक्षणका लागि यसअघि खरिद गरिएको आरडिटी किटले यकिन नतिजा नदिएपछि पीसीआर परीक्षणमै जोड दिएको थियो । तर, फेरि आरडिटीजस्तै द्रुत परीक्षणका लागि एन्टिजेन खरिद गर्न लागेको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुसमा तीन लाख र माघमा दुई लाख एन्टिजेन किट खरिद गर्न लागेको हो । एउटा किटको एक हजार रुपैयाँ पर्छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले अहिले तीन लाख एन्टिजेन किट खरिद गर्न लागेको बताए । ‘पीसीआरको रिपोर्ट तत्काल आउँदैन, एन्टिजेनको रिपोर्ट ३० मिनेटभित्र आउँछ,’ प्रवक्ता डा. गौतमले भने, ‘ननकोभिड सेवालाई पनि बलियो बनाउनुपर्छ । त्यसैले हालको अवस्थामा एन्टिजेन किटको प्रयोग आवश्यक छ ।’ पीसीआर र एन्टिजेनको प्रभावकारिता उस्तै भएको उनको भनाइ छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ
एन्टिजेन किट खरिद ५० करोड